နယူးမိဘများအဘို့အကလေးသူငယ်များအကြောင်း 13 သမ်မာကမျြးအခနျးငယျ
ကမျြးစာကကလေးများဘုရားသခင်ထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ပါတယ်။ ယရှေုသညျအမြိုးသားတို့ကိုချစ်၏ နှလုံးသားများယုံကြည်ကိုးစား, သူတို့ရဲ့အပြစ်ကင်းစင်နဲ့ရိုးရိုးအဘို့။ သူရှိသည်ဖို့်၏ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အရွယ်ရောက်သူမျိုးများအတွက်မော်ဒယ်အဖြစ်ကလေးတွေပေးအပ်သည်။
အသစ်တစ်ခုကိုကလေးမွေးဖွားအသက်တာ၌အရှိဆုံး, မင်္ဂလာရှိသောသန့်ရှင်းသော, အသက်ကိုရတတ်-ပြောင်းလဲနေတဲ့အချိန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကလေးအကြောင်းကိုဤကျမ်းအထူးရွေးချယ်နေကြသည် ခရစ်ယာန်မိဘများ ကသူတို့ကလေးရဲ့မွေးဖွား၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုစောင့်ဆိုင်းနေသော။
သူတို့ကသင့်ရဲ့များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ခရစ်ယာန်ကလေးအပျနှံ အခမ်းအနားများ, နာမည်, ဒါမှမဟုတ်ကလေးမွေးဖွားကြေညာချက်များ။ သင့်ကလေးရေချိုးခန်းဖိတ်ကြားချက်ကိုသို့မဟုတ်အသစ်ကလေးနှုတ်ခွန်းဆက်ကတ်များတွင်ဤကမျြးစောငျတစျခုရေးသားဖို့လိုပေမည်။
ကလေးသူငယ်များအကြောင်း 13 သမ်မာကမျြးအခနျးငယျ
ဟန္န ကမြုံသောသူ, သူမသားကိုဘှားမွငျလြှငျ, သူမကဝန်ဆောင်မှုအတှကျဘုရားသခငျရဲ့သူ့ကိုကျောပေးလိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ဂတိထားတော်မူခဲ့သည်။ သူမမွေးဖွားတဲ့အခါမှာ ရှမွေလသည် , ဟန္နယဇ်ပုရောဟိတ်အဖြစ်လေ့ကျင့်ရေးအတှကျဧလိထံသို့သူမ၏သူငယ်လက်သို့အပ်။ ဘုရားသခငျသညျအထံတော်သို့သူမ၏ပေါင်ထားသောဥစ္စာကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အဘို့နောက်ထပ်ဟန္နကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။ သူမသည်သုံးနောက်ထပ်သား, သမီးနှစ်ယောက်တို့ကိုဘွားမြင်လေ၏:
"ငါသည်ဤသူငယ်အဘို့ဆုတောင်း, ထာဝရဘုရားသည်ဒါကြောင့်ယခုငါထာဝရဘုရားသည်သူ့ကိုပေးပါ။ သူ့ကိုငါတောင်းသောအရာကိုအကြှနျုပျကိုခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်။ သူ့ဘဝသူသည်ထာဝရဘုရားရှေ့တော်၌အပ်ပါလိမ့်မည်။ " (1 ရှမွေလသည် 1: 27-28, င်း)
ဘုရားသခငျ၏တဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအထက်နှင့်ပင် lowliest ကလေးများကကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်အော်ဟစ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်ဖြစ်ပါတယ်:
သင်သည်သင်၏ရန်သူများကိုသငျတို့ဆန့်ကျင်သောသူအပေါင်းတို့သည်အသံတိတ်, သင့်အစွမ်းသတ္တိ၏ပြောပြရန်ကလေးများနှင့်မွေးကင်းစသွန်သင်ပြီ။ (ဆာလံ 8: 2, NLT)
ကလေးများထာဝရဘုရားထံတော်မှလက်ဆောင်ပါ၏ သူတို့ထံ၌အကျိုးကိုဖြစ်ကြသည်။ (ဆာလံ 127: 3, NLT)
ဘုရား, ဘုရားသခင့ဖန်ဆင်းရှင်, ရငျးနှီးသည်သူ၏သူငယ်များသိတယ်:
သငျသညျအကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာအပေါငျးတို့သနူးညံ့သိမ်မွေ့သော, အတွင်းအစိတ်အပိုင်းများကို လုပ်. ငါ့အမိ၏ဝမ်း၌အတူတကွငါ့ကိုဖှဲ့။ (ဆာလံ 139: 13, NLT)
သင်တို့ရှိသမျှသောအရာတို့ကိုမတော်မူသောဘုရားသခင်၏၏လှုပ်ရှားမှုနားမလည်နိုင်အောင်သင်, လေတိုက်သို့မဟုတ်ယင်း၏မိခင်ရဲ့ဝမ်း၌ကြီးထွားလာနေတဲ့သေးငယ်တဲ့ကလေး၏နက်နဲသောအရာကို၏လမ်းကြောင်းကိုနားမလည်နိုငျသကဲ့သို့။ (ဒေသနာ 11: 5, NLT)
တို့၏ဘုရားသခင်, ငါတို့မေတ္တာရှင်ရွေးနှုတ်, အမိဝမ်း၌သူ၏သားသမီးများဖြစ်ပေါ်လာသော။ သူကတရင်းတနှီးကျွန်တော်တို့ကိုသိတယ်နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုကျ:
"ဒီထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည် - အမိဝမ်း၌သင်တို့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တော်မူသောသင်တို့ကိုရွေးနှုတ်သော: ငါတယောက်တည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်အားဖြင့်မြေကြီးကိုဖြန့်ခဲ့သူကောင်းကင်, ဆနျ့သောသူအပေါင်းတို့သည်အမှုအရာ, ဖန်ဆင်းတော်မူပြီသောထာဝရဘုရားဖြစ်၏ ... " (ဟေရှာယ 44:24, င်း)
"ငါသည်သင်၏အမိ၏ဝမ်း၌သင်တို့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့မတိုင်မီသင်တို့ကိုငါသိတယ်ခင်ဗျားမမွေးဖွားခင်ငါဆိတ်ကွယ်ရာကိုသင်သတ်မှတ်ပါ ... ။ " (ယေရမိ 1: 5, NLT)
"သင်ဤသူငယ်တစုံတယောက်သောသူသည်ပေါ်ငုံ့ကွညျ့မသတိပြုပါ။ ငါသူတို့၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ငါ၏အကောင်းကင်ဘုံရှင်အဘခမည်းတော်၏ရှေ့တော်၌အစဉ်အမြဲဖြစ်ကြောင်းသင်ပြောပြသည်။ " (မဿဲ 18:10, NLT)
တစ်နေ့မှာတော့ကလူကောင်းကြီးပေးတော်မူခြင်းနှင့်ထိုသူတို့အဘို့ဆုတောင်းရန်သညျယရှေုကိုသူတို့သူငယ်ဆောင်ခဲ့စတင်ခဲ့သည်။ တပည့်သညျယရှေုနှောင့်ရှက်ခြင်းငှါမသူတို့ကိုပြောနေ, မိဘများကိုဆုံးမ။
ယေရှုက "ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဤကဲ့သို့သောပိုင်ဆိုင်ဘို့, ငယ်ကလေးများငါ့ထံသို့လာကွကုနျအံ့, သူတို့ကိုဆီးတားကြဘူး။ " ဟုပြောသည် (မဿဲ 19:14, င်း)
ထို့နောက်သူသည်သူ၏လက်နက်အတွက်ကလေးများကို ယူ. မိမိတို့ခေါင်းပေါ်မှာမိမိလက်၌ထားရှိသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၏။ (မာကု 10:16, NLT)
ယရှေုသညျမဟုနှိမျ့ခခြွငျး၏ဥပမာတစ်ခုကဲ့သို့, မိမိလက်နက်အတွက်ကလေးတစ်ဦးကို ယူ. , ဒါပေမယ့်သခင်ယေရှု၏နောက်လိုက်များလက်ခံရရှိရန်ဖြစ်ကြောင်းတော်မူသောအသေးစားနှင့်အရေးမသူတွေကိုကိုယ်စားပြု:
ထို့နောက်သူကသူတို့တွင်အနည်းငယ်ကလေးအထားတော်မူ၏။ မိမိအလက်မောင်းထဲတွင်သူငယ်ယူခြင်း, သူ "ငါ့ကိုယ်စားပေါ်မှာဤကဲ့သို့သောသူငယ်ကြိုဆိုသူမည်သူမဆိုငါ့ကိုကြိုဆို, ငါ့ကြိုဆိုသူမည်သူမဆိုငါ့ကိုဒါပေမယ့်လည်းငါ့ကိုစေလွှတ်တော်မူသောငါ၏ခမည်းတော်သည်သာကြိုဆို။ " ထိုသူတို့အားပြောဆို (မာကု 9: 36-37, NLT)
ထိုအခါကလေးကြီးပြင်း, စိတ်ဝိညာဉ်အတွက်ခိုင်မာတဲ့ဖြစ်လာခဲ့သည်, ဉာဏျပညာနှငျ့ပွညျ့စုံ; နှင့်ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုယ်တော်အပေါ်သို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ (လုကာ 2:40, NKJV)
တိုင်းကောင်းသောဆုလက်ဆောင်နှင့်တိုင်းပြီးပြည့်စုံသောဆုကြေးဇူးကိုအဘယ်သူမျှမမူကွဲသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲစေခြင်းကြောင့်အရိပ်လည်းမရှိအဘယ်သူကိုနှင့်အတူအလင်းအိမ်၏ခမညျးတျောမှဆင်းလာမယ့်အထက်ကနေဖြစ်ပါတယ်။ (ယာကုပ် 1:17, တော်မူ၏)
ဤရွေ့ကား, 10 မီးတောက်လောင်နေမိုဟာမက်အလီ Quotes တစ်ဦးစုစုပေါင်းနောက်ကောက် Are
ဆရာ Burnout နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ထိပ်တန်း 10 နည်းလမ်းများ
Capricorn အတွက် pluto သည့်အိမ်များ Transiting: သင့်ခန့်မှန်းချက်
ပြည်သူ့လေဒီဂါဂါဟာ Hermaphrodite Is ကြောင်းဆိုနေခြင်းကိုဘာကြောင့်လေ့လာပါ
ဓမ္မသစ်ကျမ်း Times သတင်းစာကနေသမ်မာကမျြးအနာဂတ္တိကျမ်း
ဘယ်လို Will ရော်ဂျာ Die ခဲ့သလား
ငါအမြဲစီးပါတယ်ခြောက် Scariest မော်တော်ဆိုင်ကယ်
20xx ၏ Tokai ငလျင်
အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်ကြီး: အထွေထွေဖိလိပ္ပုသည်အိပ်ချ် Sheridan
ပြင်သစ်တွင် 'အဘယ်အရာကိုမျှ' '', '' အဘယ်သူမျှမ '' အဘယ်သူမျှမတစျဦးကပြောပါဖို့ကိုဘယ်လို
စိန့် Gemma Galgani သူကားအဘယ်သူခဲ့သလား
ဤရွေ့ကား Funny တိုက်ဆိုင်မှုအဆိုပါ Matrix ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးဆက်ကြောင်းခံရဖို့ရှိသည်
မာတင်ဗန် Buren - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဌမကသမ္မတ
Bette Davis က Starring 8 ဂန္တဝင်
Gupta - သက္ကရာဇ်အဓိပ္ပာယ်နှင့်မိသားစုသမိုင်း